Philips Oo Daaha Ka Qaaday Sensor Dhaqdhaqaaqa Guri Casri Ah | Waxaan ka socdaa mac
In kasta oo horumarka laga yaabo inuu ahaado mid aan la aqbali karin, dhab ahaantii, Isbaanishka, aad bey u faaftaa, runtu waxay tahay qalabka guryaha ee casriga ah ayaa aad iyo aad u kala duwan.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa durbaba la jaan qaadaya HomeKit, ama API loogu talagalay soo-saareyaasha u oggolaanaya aalado iyo qalabyo kala duwan noocyo kala duwan in laga dhigo kuwo la jaan qaadaya si looga fogaan karo qalabyadayada macruufka ah. The Hue Sensor Waa sharadka cusub ee Philips. Dareeraha dhaqdhaqaaqa waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno nalalka gurigeenna markaan ku dhex soconno guriga.
1 Hue Motion Sensor, otomatiga nalalka guryaha
1.1 Tani waa sida uu u shaqeeyo Dareenka Mooshinka Philips Hue
1.2 Lagu habeyn karo khibrad guud
Hue Motion Sensor, otomatiga nalalka guryaha
Shirkadda caanka ah ee Philips ayaa hadda ku dhawaaqday qalab cusub oo ku kordhinaya xariiqda qalabka iyo nalalka casriga ah ee Hue. Waxay ku saabsan tahay dareenka dhaqdhaqaaqa Hue Sensor. Qalabkan cusubi waa dloogu talagalay inay isticmaalayaashu ku xakamayn karaan nalalka kala duwan ee gurigeenna iyada oo loo marayo iPhone ama iPad. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa qaabeynteeda inay ahaato karti u leh in lagu ogaado joogitaankeena si otomaatig ah sidaasna aan ku maareyno dabka iyo deminta nalalka markaan socono qolalka kala duwan ee gurigeenna.
Soo jeedintu sinaba uma maleyneyso inuu yahay kacaan ka-gudbis, laakiin, waxay noqon doontaa mid aad u ficil ahku. Ayaa aan tagin wax ka badan hal jeer saqbadhkii habeennimo isagoo dareemaya darbiyada ilaa ay ka helayaan shuruudo? Yaan wax ku dhicin waxoogaa munaasabad ah oo uu ku guda jiray raadintaas? Iyada oo ay Hue Sensor in "riyo" uu leeyahay maalmaheeda tiro. Sidoo kale, imaatinka soo socda ee iOS 10 iyo barnaamijka cusub ee loogu talagalay Home, dhammaan noocyada qalabka guryaha ee caqliga badan ayaa fududaan doonta in la isticmaalo.
Tani waa sida Sensor-ka Hue Motion uu u shaqeeyo Waxaa qoray Philips
Dareeraha dhaqdhaqaaqa Hue Sensor Waxaa qoray Philips ku xirma a Buundada Hue. IYO maaddaama ay u shaqeyneyso fiilo la'aan oo ay ku shaqeyso batterigeeda, waxaa la dhigi karaa meel kasta oo gurigeenna ah: derbiga, saqafka, miiska hoostiisa ama shelf ... Meel kasta oo aan ka helno, in kasta oo la siiyay naqshadeeda qurxoon iyo tan ugu yar, waxaan jeclaan lahayn inaan aragno.
Markaan u dhigno meeshii la rabay, hawsha ogaanshaha dhaqdhaqaaqa waxaa lagu hagaajin karaa booska ugu habboon. Sidan oo kale, dareemuhu wuxuu ku fulin doonaa howlaha shidida iyo daminta nalalka isla marka la hawlgaliyo.
“Dareeraha dhaqdhaqaaqa Philips Hue ma aha oo kaliya inuu bixiyo xakameyn gacmo-la’aan ah, waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa bixinta nabadda maskaxda. Si ammaan ah ayaa lagugu hagi karaa adiga oo maraya gurigaaga habeenkii nalalka »ayuu yiri Sridhar Kumaraswamy, Hogaamiyaha Ganacsiga, Nidaamka Guryaha, Philips Lighting. “Sidoo kale, maahan inay mar dambe xusuusiyaan carruurta inay damiyaan nalalka markii ay qol ka baxayaan. Ogaanshaha dareemayaasha dhaqdhaqaaqa lagu kalsoon yahay waxay bixisaa tan markii la baxayo waxayna sidoo kale ka caawineysaa inay noqoto mid tamarta si fiican u adeegsata. "
Lagu habeyn karo khibrad guud
Dareeraha dhaqdhaqaaqa Hue Sensor Philips waa heer sare ah, oo aan ku ekaanaynin shidashada iyo daminta nalalka. Qalabka cusub wuxuu taageeray noocyo badan oo casriyeyn ah iyo qaabeyn qaas ah. Dareenkan waxaan awoodnaa barnaamij jilicsan oo xoog leh waqtiyo gaar ah oo ka mid ah maalintii ama habeenkii.
Sidoo kale wuxuu leeyahay aaladda iftiinka iftiinka maalinta markaa waxay awood u leedahay inay shido laydhadhka ama dabka iyadoo ku saleysan waqtiga maalinta. Mid ku tiri waqtiga falcelinta degdegga ah, oo kuu oggolaaneysa inaad nalalka ku hagaajiso nus ilbiriqsi gudahood ka dib markay hawl galaan.
Hal Buundada Hue ogolaanaya ah isku xirka illaa 12 dareemayaal dhaqdhaqaaq Philips si loogu daro khibrad si otomaatig ah oo toos ah nalalka gurigeenna.
Iyadoo la socota dareeraha dhaqdhaqaaqa, Philips wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa nalalka cusub ee midabada cusub, oo leh cagaar iyo buluug ka roon kana iftiin badan guluubyada jira.
En Hue Sensor Philips wuxuu leeyahay qiimaha $ 39.95 waxaana laga heli doonaa websaydhada Philips Hue, Amazon.com iyo Best Buy website laga bilaabo Oktoobar 2016 Maraykanka. Marka laga hadlayo bilaabitaankeeda iyo qiimaheeda Spain, wali ma ogin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Philips waxay soosaaraysaa shiddo dhaqdhaqaaq guri oo casri ah
Muddada baytariga? Miyuu la jaan qaadi karaa HomeKit? Inay la jaanqaadayso nidaamka midabku macnaheedu maaha inay la jaan qaadi karto HomeKit kaligeed, marka, tusaale ahaan, haddii ay dhaqdhaqaaq dareento, waxay shidaysaa kuleylka. Nolosha baytarigu aad ayey muhiim u tahay
Nabad, Pablo. Batariga dareeraha ma aha batari dib loo soo celin karo. Waxay ku shaqeysaa laba baytariyada AAA oo fudud kuwaas oo muddada, sida uu qabo Philips, waa laba sano. Waxay noqon doontaa wax aan macquul ahayn haddii aan dib u buuxinno dareemaha maalin kasta ama dhowr maalmood kasta. Dhinaca kale, dareemayaasha ayaa loogu talagalay nalalka Philips Hue, maahan kuleylinta. "Dareeraha dhaqdhaqaaqa ayaa noo oggolaan doona inaan xakameyno nalalka gurigeenna markaan ku dhex soconno guriga."
Marka laga hadlayo ku isticmaalkeeda Hoyga, uma muuqato kiisku, in kasta oo ay fiicnaan lahayd. Waxaa laga soo qaatay barnaamijka laftiisa waana intaas! Maaddaama ay tahay dareemayaal, waxba ma ahan in la xakameeyo, dareeraha ayaa sameeya mar haddii la qaabeeyey.
Waxaad macluumaad dheeraad ah ku haysaa bogga rasmiga ah ee sheyga: http://www2.meethue.com/es-es/motion-sensor/
Aad baad ugu mahadsantahay booqashada aad na soo booqatay iyo ka sooqeybgalkaaga. Dhamaan wanaagsan !!!!!!!
Apple Watch 2 wuxuu dhexgeli karaa batteri awood badan